१० फागुन, काठमाडौं । ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल प्रा.लि.को गेटमा विष्फोट हुँदा घाइते भएका ३ जनाकै परिचय खुलेको छ ।
घाइते हुनेहरुमा सिंहप्रताप गुरुङ, प्रतिक्षा खड्का र अनुषा डंगोल छन् । घाइते मध्ये गुरुङको अवस्था गम्भीर छ । उनको अल्का अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ ।
अन्य दुई जनाको बीएन्डबी र मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । हाल घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृतहरु खटिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले जनाएको छ ।
बिष्फोट भएपछि प्रहरीले सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ ।
यो पनि पढ्नुस्, नख्खुस्थित एनसेल मुख्यालयमा विष्फोट, ३ जना घाइते
यसैबीच, कमलपोखरीको आँगन मिठाई पसल अगाडि भेटिएको बम नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले डिस्पोज गरेको छ ।
काठमाडौंका एसपी अशोक सिंहले बम डिस्पोज भएको पुष्टि गरेका छन्
१० फागुन, हरिहरपुर (धनुषा) । उनी बोल्न सक्तैनन् । रुनलाई उनको आशु निखि्रसकेको छ । उनी निरन्तर एकै ठाउँमा बसेर टोलाइरहन्छन् ।
डा. केसीले तोडे अनसन, फरक रुपमा लड्ने प्रतिवद्धता
युएर्इमा एक नेपालीको मृत्यु
वर्षाले बारामा घर भत्कियो, १ जनाको मृत्यु
चाड पर्वमा सिद्धार्थ यातायात प्रालिले भाडा नबढाउने
नेपाल प्रहरीमा इन्सपेक्टरदेखि खेलाडीसम्म भर्ना खुल्यो, कुन पदमा कति ?
देखावटी अनुगमन : बरामद गरिएको चार हजार केजी अवैध सुर्ती व्यापारीलाई नै फिर्ता
मृत्यु भइसकेकाको नाममा ९ लाख भत्ता, अध्यक्षले हिनामिना गरेको आरोप